Disease: Pulmonary Thromboembolisms ×
Disease: Pulmonary Thromboembolisms
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human Pulmonary embolism from pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis of clotted hemodialysis grafts: urokinase versus heparinized saline. 11041470 2000
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human Pulmonary embolism from pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis of clotted hemodialysis grafts: urokinase versus heparinized saline. 11041470 2000
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human Intravascular ultrasound in patients with acute pulmonary embolism after treatment with intravenous urokinase and high-dose heparin. 9038699 1997
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human Increasing age is a major risk factor for hemorrhagic complications after pulmonary embolism thrombolysis. 9266785 1997
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human Intravascular ultrasound in patients with acute pulmonary embolism after treatment with intravenous urokinase and high-dose heparin. 9038699 1997
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human Increasing age is a major risk factor for hemorrhagic complications after pulmonary embolism thrombolysis. 9266785 1997
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human The phase II urokinase-streptokinase pulmonary embolism trial: a national cooperative study. 1098216 1975
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human The phase II urokinase-streptokinase pulmonary embolism trial: a national cooperative study. 1098216 1975
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human The urokinase-streptokinase pulmonary embolism trial (phase II) results. 4430106 1974
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human The urokinase-streptokinase pulmonary embolism trial (phase II) results. 4430106 1974
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Therapeutic disease CTD_human The urokinase-pulmonary embolism trial. 4884574 1969
Pulmonary Thromboembolisms 0.300 Biomarker disease CTD_human The urokinase-pulmonary embolism trial. 4884574 1969